‘११० प्रतिशत सत्य कुरा भनिदिनु भयो’ कसले के भन्दिए छ नायिका रजनी केसीलाई ? हेर्नुस भिडियो – Complete Nepali News Portal
‘११० प्रतिशत सत्य कुरा भनिदिनु भयो’ कसले के भन्दिए छ नायिका रजनी केसीलाई ? हेर्नुस भिडियो
June 2, 2017	596 Views
माता सबिता सरु शर्मा आचार्य : अहिलेको समयमा चर्चित नायिका रजनी केसी सग को कुरा कानीहरु र तिता मिठा रमाईलो गफगाफ सग ऊहाको कुरा राम्रो लाग्यो हरेक मानिसले केही न केही ऑफुमा घमन्ड गरीरहेको हुन्छ तर ऊहालाई मैले तेस्तो पाईन र म माथी एक किसिमको बिश्वाश को बिचार हरु पनी राम्रो लागेको ऊहा लाई धेरै शुभकामना का साथमा कार्यसफलताको शुभकामना छ। हेर्नुहोस भिडियो
पहिलो चलचित्रबाटै स्थापित हुने निकै कम नायिकामध्ये एक हुन्– रजनी केसी । छवि ओझाको चलचित्र ‘लोफर’ व्यवसायिक रूपमा औसत भए पनि रजनीलाई भने उक्त चलचित्रको अभिनयले फाइदा पुर्‍यायो । त्यसपछि उनी म्युजिक भिडियो, विज्ञापन तथा चलचित्रमा व्यस्त भैरहिन् । चलचित्र ‘परदेशी’ व्यवसायिक रूपमा सफल भएपछि रजनीको करियरले गति लियो ।
‘रज्जू’ मेरो निकनेम जस्तै हो । मलाई अहिले पनि घरमा यही नामले बोलाइन्छ । खासगरी बुवा तथा आमाले त यही नामले मात्र बोलाउनु हुन्छ । त्यसो त विद्यालयमा अध्ययरनत छँदा पनि सहपाठी तथा शिक्षकहरूले मलाई ‘रज्जू’ नै भनेर बोलाउनु हुन्थ्यो तर, खै किन हो मलाई चलचित्र क्षेत्रमा भने यो नामले चिनिन मन लागेन ।
म भगवान शिवको भक्त हुँ, त्यसैले मेरा लागि सोमबारले विशेष महत्व राख्छ । यसो भन्दैमा म प्रत्येक सोमबारको व्रत बस्दिन तर सोमबार दिनभरि म शाकाहारी हुन्छु । साताको छ दिन खानामा मासु अनिवार्य चाहिए पनि सोमबार भने म माछा–मासु केही पनि खान्न । समयले साथ दियो भने यो दिन भगवान शिवको दर्शन गर्न मन्दिर पनि जान्छु ।
म फार्मेसीकी विद्यार्थी हुँ । मैले फार्मेसीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकी छु अर्थात् मैले बी फार्मेसी गरेकी छु । चलचित्रमा आउनुअघि म फार्मेसीकै क्षेत्रमा कार्यरत थिएँ । एचआईभी एड्ससम्बन्धी काम गर्ने एनजिओ ‘मास’ मा समेत केही वर्ष काम गरेकी छु । भविष्यमा पनि म पुन: यही पेसामा फर्कन सक्ने सम्भावना छ ।
हरेक व्यक्तिको जीवनमा एक–एक जना ब्रेस्ट फ्रेन्ड हुन्छन् । मेरो जीवनमा पनि एक जना त्यस्तै बेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ, जसलाई म आफ्नो हरेक कुरा सेयर गर्छु । अरू कसैलाई भन्न नसकेको कुरा, आफूलाई गाह्रो परिरहेको कुरा तथा अत्यन्त खुसीको क्षण पनि म आफ्नी ती बेस्ट फ्रेन्डसँग सेयर गरिरहन्छु । उनी अरू कोही नभएर मेरी आफ्नी आमा शान्ति केसी हुनुहुन्छ ।
मलाई चिन्ने अधिकांशले कति हँसिली भनेर प्रशंसा गर्नुहुन्छ । म प्राय: हाँसि नै रहेकी हुन्छु । धेरैलाई थाहा नभएको एउटा गोप्य कुरा के छ भने म जति हँसिली छु, त्यति नै रिसाहा पनि छु । मलाई हत्तपत्त रिस उठ्दैन । रिस उठिहाल्यो भने पनि तुरुन्तै शान्त हुन्छु । रिस उठेको बेला म प्राय: कसैसँग बोल्दिन तर मसँग रिसाएर गएको मान्छे पुन: मसँग बोल्न आयो भने तुरुन्तै फक्किन्छु ।
चलचित्र ‘परदेशी’ को सफलताले मलगायत चलचित्रको सम्पूर्ण युनिट नै खुसी भयो । मैले अभिनय गरेको दोस्रो चलचित्र नै अत्यधिक सफल हुँदा मेरो खुसीको त सिमाना नै रहेन तर, यो चलचित्रको सफलताले मलाई कता–कता दु:खी पनि बनाएको छ । यो चलचित्रमा मेरो अभिनय हेरेपछि पाल्पासहित पश्चिम नेपालका थुप्रै फेसबुक प्रयोगकर्ताले म्यासेन्जरमार्फत विवाहको प्रस्ताव राख्नुभयो । सुरु–सुरुमा आएका प्रस्तावलाई सम्झाइ–बुझाइ गरें, तर त्यस्तो प्रस्तावको बाढी नै आएपछि भने ती म्यासेज पढ्नै छाडिदिएँ । साप्ताहिकबाट